Louisiana က၎င်း၏တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ရန်ကြည့် - တရုတ် Yangzhong Luck စတားတံဆိပျ
ဝီဇီယားနားပြည်နယ်၏ထိပ်တန်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရာရှိတဦး၏အဆိုအရတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တိုးချဲ့ကုန်သွယ်ဆက်ဆံမှုသို့ရေနံနှင့်သဘာဓာတ်ငွေ့နှင့်ဓာတုထုတ်လုပ်မှုအတွက်၎င်း၏အားသာချက် parlay ဖို့လိုသည်။
ယောဟန်သည်ဗေလ Edwards ကဇန်နဝါရီလအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဒွန် Pierson Louisiana စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းရေးမှူးခန့်အပ်ခဲ့သည်။ စွမ်းအင်နှင့်ဓာတုထုတ်လုပ်ခြင်း, သစ်တောနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း - Pierson ပြည်နယ်က၎င်း၏ရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားဟုပြောသည်။
Louisiana နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ 2008 ခုနှစ်မှစ. Louisiana တစ်ဦးချင်းနိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အမေရိကန်အတွက်ပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီများကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားကြပါပြီ။
တရုတ် 2014 ခုနှစ်တင်ပို့မှုပိုမိုထက် $ 8.6 ဘီလီယံ, Louisiana ထိပ်တန်းပို့ကုန်ဈေးကွက်ကိုကိုယ်စားပြုအမေရိကန်အကြား Louisiana အမှတ်4အဆင့်ဟာပြည်မမှပို့ကုန်အတွက်ကဖော်ပြသည်။
Pierson ပြည်နယ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုတိုးချဲ့များအတွက်အထူးသဖြင့်အလားအလာဖြစ်ပေါ်လာနှစ်ခုဒေသများရှိပါသည်ဟုပြောသည်။ တစ်ခုမှာဓာတုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော Methanol ကဲ့သို့ဓာတု feedstock ထုတ်လုပ်သည်။
နောက်ထပ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အနုတ် 259 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှအအေးသောအခါနေသူများကဖန်တီးပေးသောအရည်ကသဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဒါမှမဟုတ် LNG ၏ထုတ်လုပ်မှုပါဝငျသညျ။
2014 ခုနှစ်တွင်ဝီဇီယားနား Louisiana ရဲ့စိန့်ဂျိမ်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ထဲမှာ Methanol စက်ရုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှန်ဒေါင်း Yuhuang ဓာတု Co. , ကနေ $ 1,85 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံခြုံ။ 400 အမြဲတမ်းအလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်. 2000 ယာယီဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များဖန်တီးရန်မျှော်လင့်သောစက်ရုံ, ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကလိုင်းပေါ်လာခြင်းနှင့် 2017 ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
"ကျနော်တို့ကအမေရိကန်အတွက်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ၏အရေအတွက်နှစ်ခုထုတ်လုပ်သူများမှာအဖြစ်ရေနံစျေးနှုန်းများအတွက်တစ်စက်, ခက် Louisiana အချို့ဒေသများ hit ဖြစ်ပါတယ်," Pierson ကဆိုသည်။
"ဒါပေမယ့်အနိမ့်စျေးနှုန်းများလည်းရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဓာတုထုတ်လုပ်မှုများအတွက် feedstock ဖြစ်ကြောင်းနှင့် feedstock ထုတ်လုပ်သောစက်ရုံပါဝါဖို့လည်းအသုံးပြုကြသည်ကတည်းက။ , အခွင့်အလမ်းဖန်တီး"
တရုတ်နိုင်ငံ၏ကြီးထွားလာစီးပွားရေးကိုဓာတုထုတ်ကုန်များအတွက် feedstock တောင်းမည်, နှင့်အပေါ် Louisiana ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ မက္ကစီကိုပင်လယ်ကွေ့ကလွယ်ကူတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေပြည်နယ်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုတည်ထောင်ရန်အဘို့လုပ်, ပြီးတော့ပြည်နယ်၏ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်မှတဆင့်သို့မဟုတ်ယင်း၏ဆိပ်ကမ်းများထဲကတစ်ခုကနေနောက်ကျောတရုတ်နိုင်ငံသို့ထုတ်ကုန်တင်ပို့မည်, Pierson ကဆိုသည်။
Louisiana ရဲ့ဆိပ်ကမ်းစနစ်က 27 ရေနက်နှင့်ရေတိမ်ပိုင်း-မူကြမ်းဆိပ်ကမ်းများနှင့်တကွ, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။